ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝါယာကြိုးမပါဘဲအတော်လေးစာသားလျှပ်စစ်စွမ်းအင်များထုတ်လွှင့်သည်။ ပြည်သူ့မကြာခဏဥပမာ, သတင်းအချက်အလက်ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ဖို့အလားတူအဖြစ်ရေဒီယို, ဆဲလ်ဖုန်း, ဒါမှမဟုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်နှိုင်းယှဉ် Wi-Fi အင်တာနက်။ အဓိကခြားနားချက်ရေဒီယိုသို့မဟုတ်ခရိုဝေ့ဖ် transmission ကိုနဲ့ဖြစ်ပြီး, နည်းပညာသငျသညျမူလကမှတဆင့်ကူးစက်သောသမျှသောစွမ်းအင်ရုံသတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်ထူထောင်မဟုတ်, အာရုံစိုက်။
စွမ်းအင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါသငျသညျ 100% အနီးရှိသို့မဟုတ်မှာတတ်နိုင်သမျှအကျိုးရှိစွာဖြစ်ချင်တယ်။
ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်အတော်လေးနည်းပညာအသစ်များ၏ဧရိယာဒါပေမဲ့အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျပြီးသားဥပမာ, ကသတိထားဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲကော့ဒလက်နည်းပညာကို အသုံးပြု. စေခြင်းငှါ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ ဟာပုခက်သို့မဟုတ်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းသစ်ကိုအားသွင်း pads အတွက် recharges ရာ။ သို့သော်နည်းပညာပိုင်းကြိုးမဲ့အကွာအဝေးမဆိုသိသာထင်ရှားသောပမာဏအပါဝင်ပါဘူးစဉ်သူတို့အားဥပမာနှစ်ခုစလုံးသည်သွားတိုက်တံဟာအားသွင်းပုခက်ထဲမှာထိုင်နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်း pad ပါတွင်တည်ရှိသည်။ ထိထိရောက်ရောက်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအကွာအဝေးမှာစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှင်၏နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
အဲဒီမှာလျှပ်စစ်မီးဥပမာထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြိုးမဲ့ရှင်းပြဖို့နှစ်ခုအရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်ကြောင်း, လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ, က "inductive နားချင်းဆက်မှီ" နှင့် "ခွငျးအားဖွငျ့အလုပ်ဖြစ်တယ် လြှပျစစျ " ။
အဆိုပါ Wireless Power Consortium ၏အဆိုအရလည်း inductive အားသွင်းလို့လူသိများတဲ့ "ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်အဆိုပါနည်းပညာနှစ်ခုကွိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ ။ တစ်ဦး transmitter ကိုနှင့်လက်ခံတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလက်ရှိအဆိုပါ transmitter ကိုကွိုင်ရှောက်သွားဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးသံလိုက်ထုတ်လုပ် လယ်ပြင်၌ဤအလှည့်၌, လက်ခံကွိုင်တစ်ဗို့ induces; ။ ဒီမိုဘိုင်း device ကို power တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် "။
သင်တစ်ဦးဝါယာကြိုးမှတဆင့်လျှပ်စစ်လက်ရှိညွှန်ကြားအခါတိုင်းနောက်ထပ်ရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သဘာဝဟာမြို့ပတ်ရထားသံလိုက်စက်ကွင်း wire ကိုလှည့်ပတ်နေသူများကဖန်တီးကြောင်း, ရှိနေပါသည်။ နှင့်ဝါယာကြိုးရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းအားကောင်းရရှိသွားတဲ့သောသင်ကွင်းဆက် / ကွိုင်ကြောင့်ဝါယာကြိုးလျှင်။ သင်ကဖြတ်သန်းကာလျှပ်စစ်လက်ရှိရှိသည်, ပထမဦးဆုံးကွိုင်၏သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းကြောင့်ကွိုင်နေရာမဟုတျကွောငျးဝါယာကြိုးတစ်စက္ကန့်ကွိုင်ယူလျှင်, ပထမဦးဆုံးအကွိုင်ကနေလျှပ်စစ်လက်ရှိအဆိုပါသံလိုက်စက်ကွင်းမှတဆင့်သွားလာနှင့်မှတဆင့်ပြေးစတင်ပါလိမ့်မယ် ဒုတိယကွိုင်, ထို inductive နားချင်းဆက်မှီပါတယ်။
လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံမှာအားသွင်းမယ့်သံလိုက်စက်ကွင်းကို charger ကိုအတွင်းပိုင်းတစ် coil ဝါယာကြိုးမှလျှပ်စစ်လက်ရှိပို့ပေးတဲ့နံရံထွက်ပေါက်မှချိတ်ဆက်နေသည်။ အဆိုပါသွားတိုက်တံ၏အတွင်းပိုင်းတစ်စက္ကန့်ကွိုင်, သင်တရားစွဲဆိုခံရဖို့က၎င်း၏ပုခက်၏အတွင်းသွားတိုက်တံကိုနေရာချတဲ့အခါမှာလျှပ်စစ်ကလက်ရှိ၎င်းသံလိုက်စက်ကွင်းဖြတ်သန်းနှင့်သွားတိုက်တံအတွင်းရှိကွိုင်မှလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့ပေးရှိပါသည်, ထိုကွိုင်တရားစွဲဆိုရရှိသည့်ဘက်ထရီချိတ်ဆက် ။
ဂီယာလိုင်းပါဝါဖြန့်ဖြူး (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစနစ်က) အားတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကြိုးမဲ့ပါဝါဂီယာပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အဆိုပြုနှင့်သရုပ်ပြခဲ့သည် Nikola Tesla ။
1899 ခုနှစ်, တက်စလာနှစ်ဆယ်ငါးမိုင်ဝါယာကြိုးမသုံးဘဲသူတို့ရဲ့ပါဝါအရင်းအမြစ်မှတည်ရှိသောချောင်းမီးခွက်၏လယ် powering အားဖြင့်ကြိုးမဲ့ပါဝါဂီယာသရုပ်ပြခဲ့သည်။ တက်စလာရဲ့အလုပ်ကြီးအဖြစ်အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားတွေးခေါ်အမျှအဲဒီအချိန်ကကြေးနီဓာတ်အားလိုင်းများတည်ဆောက်မယ့်အစားတက်စလာ၏စမ်းသပ်ချက်လိုအပ်ကြောင်းပါဝါဂျင်နအမျိုးအစားကိုတည်ဆောက်ရန်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းချိုသာခဲ့သည်။ တက်စလာသုတေသနရန်ပုံငွေထဲကပွေးအဲဒီအခြိနျမှာကြိုးမဲ့ပါဝါဖြန့်ဖြူးနေတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးရှိစွာနည်းလမ်းကိုတီထွင်လို့မရပါ။
တက်စလာ 1899 ခုနှစ်တွင်ကြိုးမဲ့အာဏာလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ်, ယနေ့စီးပွားဖြစ်ရှိရရှိနိုင်လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံနှင့် charger ကိုဖျာထက်အနည်းငယ်ပိုဖြစ်တယ်, နှစ်ဦးစလုံးနည်းပညာများ, ထိုသွားတိုက်တံ, ဖုန်းနှင့်အခြားသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်အလွန်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အားသွင်းဖို့ကိုပိတ်ပါ။
သို့သော်သုတေသီတစ်ဦး MIT ကအသင်းကို 2005 ခုနှစ်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးမှာလက်တွေ့ကျတဲ့ကြောင်းအိမ်ထောင်စုအသုံးပြုမှုအတွက်ကြိုးမဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်တဲ့နည်းလမ်းတီထွင် Marin Soljacic ကဦးဆောင်။ WiTricity ကော်ပိုရေးရှင်းကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများအတွက်နည်းပညာအသစ်စီးပွားဖြစ်ဖို့ 2007 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဆေးပညာအတွက် Ultrasound များ၏သမိုင်း
အဘယ်သူသည် Viagra တီထွင်?
ယာကုပ်အမျိုးကို Perkins ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အားလုံးအချိန် 25 အဆိုးဆုံး Rap ဂီတ Lyrics
တောင်ပေါ်မှာ Whitney: ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအမြင့်ဆုံးတောင်
တစ်ဦး Appositive ဆိုတာဘာလဲ
အစိုးရအတွက်က Black ကိုယ်စားပြုမှု
Gurmukhi Vowel (Laga Matra) ပုံ
ဘေ့စန္ဒယား Chord စာကြည့်တိုက်
Typing error တစ်ခု
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Vicksburg ၏ Siege
ခန္ဓာဗေဒ Direct စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခန္ဓာကိုယ်လေယာဉ်
6 အမျိုးသားနဂါး Ball ကို Z ကို Cosplayers ဝမ်းခွဲ
အဆိုပါ Majdanek အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မရဏစခန်း
လမ်းညွှန်အဖြစ် Midheaven ရဲ့အနန္တတန်ခိုးရှင်
Up ကိုဂိမ်းတွင် Movin '' အဆိုပါ "ဒါဟာအနိုင်ရမည်ဟုဖို့မိနစ်"
MIT က - နည်းပညာအဆင့်လက်ခံရေး၏မက်ဆာချူးဆက်
ထိပ်တန်း 10 Shoegaze အယ်လ်ဘန်